'Ibali laseMelika laseHororor' laBelana ngeTeksi kwaye liqala ixesha lokuFota 10
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo 'Ibali laseMelika laseHororor' laBelana ngeTeksi kwaye liqala ixesha lokuFota 10
by UTrey Hilburn III Agasti 31, 2020
ibhalwe ngu UTrey Hilburn III Agasti 31, 2020
Ibali laseMerika elibuhlungu ithathe abalandeli ngokuhamba. Uthotho olusekwe kwi-anthology luye lwehla kwiindlela zohlobo lwamaxesha alithoba ahlukeneyo. Nganye, indlela esikhokelela kwi-sub-genres ezisusela kwi-80's slasher ukuya kwi-covens yamagqwirha nayo yonke into ephakathi. Ngoku kubonakala ngathi Ibali laseMelika lokuNgcangcazela ixesha leshumi liqalisile ukuvelisa.
UMdali, uRyan Murphy uthathe i-Instagram ukuze abelane ngeentlanzi ezibonisa ukubamba iintlanzi kunye nomyalezo wokuhlaziya abalandeli.
"Ibonaka ingathi Ibali laseMerika elibuhlungu Ixesha le-10 liza kusungulwa kwemveliso ka-Okthobha (efanelekileyo). Enkosi kuye wonke umntu osebenza nzima ukuqinisekisa ukuqala okukhuselekileyo kwe-cast kunye ne-crew. Kwaye oku kuyasinceda. ” UMurphy wabhala.
Akusekho lizwi ukuba ixesha leshumi liza kuhamba ngawuphi umxholo. Siyazi ukuba kungenzeka ukuba yenzeke elwandle. Leyo nyani idityaniswe nentlanzi Dagon Ukujonga amazinyo kaMurphy athunyelwe kusikhokelela ekubeni sikholelwe ukuba kule sizini izayo iya kuba yi-HP Lovecraft kunye noloyiko lwasemanzini oluphefumlelweyo.
Olo qikelelo. Nangona kunjalo, ulwandle kunye namazinyo, kunye nenyani yokuba uLovecraft kutshanje ube sisiqhelo zonke zizinto ezilungileyo.
Nicinga ntoni ngexesha le-10 Ibali laseMerika elibuhlungu izakuba malunga? Sazise kwicandelo lamagqabaza.
Unxanelwe ukoyikeka okungaphezulu kwamanzi? Cofa apha.
84Ibali laseMerika elibuhlunguCovenihleloRyan Murphy
Umsebenzi omtsha 'weParanormal' ubhengeza uMhla wokuKhutshwa
'Isandi' sifumana iTrailer yokuqala